धेरै वर्षको लागि लेखकहरू, डिजाइनरहरू, निर्देशकहरूको अनावश्यक कदम चाल्नु भएको छ, उनीहरूको कथाहरू, कथाहरू, शैलीहरू आविष्कार गर्छन्, र तिनीहरूमध्ये प्रत्येकले प्रेमी दर्शकलाई नयाँ, असाधारण, थप आकर्षक देखाउन खोज्ने प्रयास गर्छन्। उत्पत्तिको पछाडि नतिजा मध्ये एक चलचित्र, मंगा, एनिम र डोरमामा लिइएको यस्तो दिशाको उद्भव थियो जुन लिङ्ग साजिशको रूपमा थियो। यो के हो? अब हामी विश्लेषण गर्नेछौं, तर पहिला हामी नोटिस गर्नेछौं कि लिङ्ग अनिश्चितता उत्पन्न भएको छ र एशियाई देशहरूमा विशेष गरी चीन, जापान, ताइवान र कोरियामा अविश्वसनीय रूपमा लोकप्रिय भएको छ।
लिङ्ग साजिश के हो?
यसको मतलब तथ्यमा छ कि माथिल्लो वर्णित कामको मुख्य चरित्र (मंगा, एनिम, इत्यादि) को मुख्य पात्रको सेक्स कथा रेखाको अन्त्य सम्म व्यावहारिक रूपमा अज्ञात रहन्छ (वा यो यस्तो एक अन्य चरित्रको लागि हो, जबकि दर्शक, जस्तै भनिएको छ पहिले नै थाहा छ)। र यो एक केटी जस्तै सबैलाई समझाउन र सबै कुरा कि त्यो एक पुरुष हो या एक मानव हो जुन मानिस मानवता को महिला आधा प्रतिनिधि को रूप मा रहन को कोशिश गरेर हुन सक्छ। यस कार्यको कारण धेरै आविष्कार गरिएको थियो: पुरानो सपना (एक मंगाको उदाहरण पछ्याउने - एथलीट च्याम्पियन हुन), बदला, प्रेम, पैसाको लागि आवश्यक छ।
कलामा यस्तो प्रवृतिको विकासको लागि कारण (यदि यो कल गर्न सम्भव छ भने) लिङ्ग साजिशको रूपमा, अन्ड्र्यानी भयो - एक व्यक्तिको क्षमता, बराबर संख्यामा होइन, तर महिला र पुरुष विशेषताहरू प्रकट गर्न। र यस घटना को दुई किसिमहरु को भेदभाव: मनोवैज्ञानिक र शारीरिक।
पहिले, एन्ड्रोइग्नी "हेरोफेरोडाइट" को अवधारणाको तुलनामा तुलनात्मक थियो, तर पछि यो शब्द विशेष रूपमा psychosocial पहलुहरु को लागी एनाटिकल र फिजिकल लक्षणहरु लाई हटाइयो।
Androgyny, एक फैशनेबल प्रवृतिको रूपमा, जुन प्रसिद्धि कमाउन सम्भव थियो, धेरै हस्तियाँ प्रयोग गर्ने समय थियो। यसैले उनीहरूले सामान्य प्रवाहबाट एक्सेल खोजे, विद्रोही स्वभाव देखाउँछन् भने मुखमा प्रतिभाको मद्दतले ज्ञात भएपछि कम्तीमा एक असाधारण संख्याको लागि धन्यवाद। यद्यपि, न्यायको लागि, यो ध्यान दिनु पर्छ कि केही मानिसहरू सँग समान विशेषताहरू छन्, जस्तै तिनीहरू प्रकृतिबाट भन्छन्। र तिनीहरू आफैंलाई दिईदैनन्, त्यसोभए, कृत्रिम कष्टप्रद उपस्थिति, विभिन्न कस्मेटिक साधन वा अलमारीको तत्वहरू प्रयोग गरी।
अधिकांश डोराम र anime को मूल मुख्य रूपमा मंगा हुन् - एक प्रकारका जापानी कमेसी जसले एशियाई राष्ट्रहरू, विशेष गरी जापानी र कोरियालीहरू र विश्वभरका धेरै मानिसहरूको बीचमा धेरै लोकप्रिय नागरिकहरू र उमेरका बीचमा धेरै लोकप्रियता पाएका छन्।
मंगा, जसको लिङ्ग सांगीतिक आधारभूत कथाको रूपमा सेवा गरियो, जापानमा लोकप्रियता प्राप्त भयो, विशेषगरि युवा केटीहरू र केटीहरूको लागि। त्यसपछि यो छिमेकी राज्यहरूमा फैलाउन थाले, अधिक र अधिक प्रशंसकहरू प्राप्त। यो तथ्य यस विषयको विकास र एक समान प्लसको साथ ठूलो संख्याको मंगाको रिहाई को लागि एक प्रभाव को रूप मा सेवा गरे।
पहिलो प्रोजेक्ट, जो साजिशको आधारमा आधारित थियो, जापानको सोयाउज् मंगा थियो "तपाईंको सबै रंगमा, वा अयोग्य प्रमोदवन।" केटीले एक केटाको रूपमा जन्माउने पुरुष स्कूलमा प्रवेश गर्छ, खेलको चोट र जमघटमा फर्किने लक्ष्यको साथ, जसलाई उनले मन पराए।
यस समय, त्यहाँ एक सय भन्दा बढी मंगा पनि रिलीज गरिएको छ वा अझै पनि जारी छ, यस्तै विषयको साथ: सेकेयर, मीठो रगत, अफवाहमा मिडियाो-कुन, ब्रेमेन आदि।
Anime मा दुरुपयोग
एनिमलाई मंगा भन्दा पनि छिटो फैलिएको थियो, किनकि धेरै प्रविधिहरूले यो महसुस गरे कि पहिले नै तयार गरिएको साजिश प्रयोग गरेर सम्भव छ कि धेरै लाभदायक व्यवसाय सिर्जना गर्न, प्रशंसकहरूको भावना र इच्छाहरूमा खेल्ने उनीहरूको मनपर्ने कथा पढ्न, तर टिभिमा हेर्नको लागि। यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस् कि तपाईं चलचित्र मंगा गर्न सक्नुहुनेछ, र पैसा र सफलता पनि बनाउनुहोस्, र भौतिक स्रोतहरू, धेरै एनिमेटरहरू धेरै एनिममा रिलीज गर्न पुग्यो। तदनुसार लिङ्ग साजिश, एक थप विषयको रूपमा उल्लेख गर्न थाले, पाठकहरूलाई रोचक, र यसैले भविष्यका दर्शकहरूलाई। यस श्रेणी को सबै भन्दा लोकप्रिय परियोजनाहरु मा: थाउ मुसुको, प्रजनन चुंबन, कुरिरेहिम, शूगो चाारा र अन्य। त्यहाँ अझै एनिमेटेड कार्यहरूको एक ठूलो संख्या हो जुन सेक्सको "लिंग साजिश" सुरक्षित रूपमा सुरक्षित हुन सक्छ, र प्रायः यो कोटिको अर्को बिरुद्ध कमेडी जस्ता शैली हो।
त्यहाँ डोरामाहरू पनि छन्
ईमानदारीपूर्वक बोल्दै, डोरामा एक साधारण "साबुन ओपेरा" हो जुन, टेलिभिजन च्यानलहरू द्वारा प्रसारण गर्दै, केवल जापानी। खैर, सम्भवतः तिनीहरूसँग थोपा उच्च दर्जा छ। जापानी anime उद्योग डोरोमा प्रवेश गर्न समय छैन, लिंगको यो तत्काल सिनेमाको यो श्रेणीमा घुसिएको, राम्रो तरिकाले संलग्न र फैशनको अर्को प्रवृत्तिको रूपमा उत्प्रेरित। यसको नामले उल्लेख गरिएको शैली अंग्रेजी शब्द नाटकको कारण हो, तथापि, नाटकीय संग समानांतरमा, रोमांटिक, कमेडी, जासूस चलचित्रहरू र यहाँसम्म डराएर नाटकहरू पनि छन्।
पहिलो पटक, नाटकको लागि साजिशको मुख्य लाइनको रूपमा लिङ्ग साजिश कोरियाई टेलिभिजन सीरीजमा पहिलो क्याफे प्रिंसमा प्रयोग गरिएको थियो। यस प्रकारको ज्ञात कार्यहरू निम्न हुन्: "एन्जिल। तपाईं सुन्दर हुनुहुन्छ, "के-पप: जीवित विद्यालय", "हाम्रो गोप्य", साथसाथै अफोरान्डर नाटक "तपाईंको लागि सबै रंगहरूमा"।
दर्शकहरु बीच लोकप्रियता को बावजूद, एक उपगणना को रूप मा लिङ्ग साजिश सिनेमा मा रूट नहीं लिया। प्रायः सम्भव छ, सम्पूर्ण समस्या पैसामा छ: पूर्ण चलचित्रको रिलीजको लागि, तपाईंलाई ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरू समावेश छ, दृश्यहरू किन्नुहोस्, सील वेशभूषाहरू, विशेष प्रभावहरू उल्लेख गर्नुपर्दैन। यसको अतिरिक्त, लिङ्ग साजिश तत्वका साथ कार्यहरूमा रुचिहरू उठाइयो र अझै पनि एशियाई देशहरूमा प्रासंगिक बनी रहन्छ, जुन फिल्म अनुकूलनका सबै छनौट प्रकारहरू माथि उल्लेखित डोरम र एनिम को चयन गर्दछ।
तथापि, लिङ्ग अनिश्चितता को विषय बाट अब सम्म यो प्रसिद्ध अमेरिकी फिलिमहरु "श्रीमती ड्यूबिट फायर" र "सी द म्याक द बिग मामी" को एक श्रृंखला को रूप मा पुरुषहरु लाई महिलाहरु लाई भंग गर्ने आधार मा आधारित छ। र दुवै अवस्थामा यो शैली हास्यको रूपमा परिभाषित गरिएको छ जसमा मुख्य क्यारेक्टर इन्जिनियरिङ राख्ने प्रयास गर्दा मुख्य क्यारेक्टरको हास्य संख्यामा हास्य छ।
"फॉर्च्यून को सज्जन": फिलिम निर्देशक र रचना को कहानी
इगोर कोस्तोओलेस्की: एक रोमान्टिक सुन्दर व्यक्ति को फिलिमोग्राफी
शरद ऋतु Hack: प्लास्टिक बोतल देखि उल्लू
आफ्नो हातले प्रवेश धातु ढोका को मर्मत
Gatsaniya: को जाडो राख्न कसरी? wintering gatsanii
मास्को Dolphinarium - रूस को राजधानी मा एक अद्वितीय मनोरञ्जन जटिल
के तपाईं आफ्नो हातमा काठको शौचालय निर्माण जान्नु आवश्यक?
आत्माको "हरियो स्याउ": को गर्मी को ताजगी र एक बोतल मा वसन्त को ठंडक